Nanomboka Nanao Mpianatra i Jesosy | Fiainan’​i Jesosy
NANOMBOKA NANARAKA AN’I JESOSY IREO MPIANANY VOALOHANY
Nankany Galilia i Jesosy taorian’ilay 40 andro tany an-tany efitra. Nankany amin’i Jaona anefa aloha izy, ka hoy i Jaona tamin’ny olona teo aminy: “Iny ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao! Izy ilay nolazaiko hoe: Misy olona ho avy ao aoriako, nefa efa nialoha ahy izy, satria efa nisy talohako.” (Jaona 1:29, 30) Zokin’i Jesosy i Jaona nefa nahalala fa efa nisy talohany i Jesosy, saingy anjely tany an-danitra.
Toa tsy tena azon’i Jaona antoka hoe i Jesosy no ho Mesia, tamin’i Jesosy nanatona azy mba hatao batisa, herinandro vitsivitsy talohan’izay. Niaiky izy hoe: “Izaho aza tsy nahalala azy akory, fa ny mba hampisehoana azy amin’ny Israely no anaovako batisa amin’ny rano.”—Jaona 1:31.
Nanohy nitantara ny batisan’i Jesosy izy ka nilaza hoe: “Hitako nidina toy ny voromailala avy tany an-danitra ny fanahy, ka nitoetra teo amboniny. Izaho aza tsy nahalala azy akory, fa Ilay naniraka ahy hanao batisa amin’ny rano mihitsy no nilaza tamiko hoe: ‘Izay olona hitanao idinan’ny fanahy sy itoerany, dia izy ilay manao batisa amin’ny fanahy masina.’ Efa hitako izany, ka nanaporofo aho fa izy no Zanak’Andriamanitra.”—Jaona 1:32-34.
Niaraka tamin’ny mpianany roa lahy i Jaona ny ampitso. Nanatona azy ireo indray i Jesosy ka hoy i Jaona: “Iny ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra!” (Jaona 1:36) Tonga dia nanaraka an’i Jesosy ireo mpianatr’i Jaona Mpanao Batisa ireo. I Andrea ny iray, ary Jaona koa no anaran’ilay iray. Mety ho io Jaona io no nanoratra an’ilay fitantarana. Toa zanak’olo-mpiray tam-po izy sy Jesosy, satria zanak’i Salome i Jaona. Rahavavin’i Maria angamba i Salome ary vadin’i Zebedio.
Hitan’i Jesosy nanaraka azy i Andrea sy Jaona, ka hoy izy: “Inona no tadiavinareo?”
Hoy ireo: ‘Raby, aiza ianao no mipetraka?’
Hoy i Jesosy: “Avia, dia ho hitanareo.”—Jaona 1:37-39.
Tamin’ny efatra tolakandro teo ho eo tamin’izay, ary nijanona tao amin’i Jesosy i Andrea sy Jaona tamin’iny andro iny. Faly be i Andrea ka hoy izy rehefa nahita an’i Simona na Petera rahalahiny: “Efa hitanay ny Mesia!” (Jaona 1:41) Dia nentiny tany amin’i Jesosy i Petera. Toa hitan’i Jaona koa i Jakoba rahalahiny ary nentiny tany amin’i Jesosy, rehefa jerena ny nitranga taorian’izay. Tsy noresahin’i Jaona tao amin’ny fitantarany anefa izany.
Nihaona tamin’i Filipo avy any Betsaida i Jesosy ny ampitso. Eo akaikin’ny morontsiraka avaratry ny Ranomasin’i Galilia i Betsaida ary tao no niavian’i Andrea sy Petera. Hoy i Jesosy tamin’i Filipo: “Andao hanara-dia ahy.”—Jaona 1:43.
Hitan’i Filipo i Natanaela na Bartolomeo, ka hoy izy taminy: “Efa hitanay ilay olona voasoratr’i Mosesy ao amin’ny Lalàna sy voasoratry ny mpaminany, dia i Jesosy, zanak’i Josefa avy any Nazareta.” Tsy nino anefa i Natanaela ka hoy izy tamin’i Filipo: “Mba misy zavatra tsara angaha moa avy any Nazareta?”
Hoy i Filipo: “Avia ange jereo e!” Hitan’i Jesosy nanatona azy i Natanaela, ka hoy izy: “Izany ka tena Israelita, sady olona tsy misy fitaka.”
Nanontany i Natanaela hoe: “Ahoana no ahafantaranao ahy?”
Hoy i Jesosy: “Efa hitako ianao talohan’ny niantsoan’i Filipo anao, tamin’ianao teo ambany aviavy.”
Gaga i Natanaela ka niteny hoe: “Raby ô, Zanak’Andriamanitra ianao! Mpanjakan’ny Israely ianao!”
Hoy i Jesosy: “Ny nilazako taminao ve hoe hitako teo ambany aviavy ianao no mahatonga anao hino? Mbola hahita zavatra lehibe noho izany ianao.” Nampanantena izy avy eo hoe: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ho hitanareo ny lanitra misokatra, sy ny anjelin’Andriamanitra hiakatra sy hidina mankatỳ amin’ny Zanak’olona.”—Jaona 1:45-51.
Niala tany amin’ny Lohasahan’i Jordana i Jesosy sy ireo mpianany vaovao taoriana kelin’izay, ary nankany Galilia.
Iza avy no mpianatr’i Jesosy voalohany?
Ahoana no nahalalan’i Petera sy Jakoba an’i Jesosy?
Inona no naharesy lahatra an’i Natanaela hoe Zanak’Andriamanitra i Jesosy?
Hizara Hizara Nanomboka Nanao Mpianatra i Jesosy